people Nepal » विश्वकप २०१८ विश्वकप २०१८ – people Nepal
विश्व विजेता फ्रान्सेली टोलीको स्वदेशमा भव्य स्वागत !
06:26:04 | Banner-1 खेलकुद विश्वकप २०१८ , Durga Panta
पेरिस (एजेन्सी)– विश्व कप विजेता फ्रान्सेली टोलीको स्वदेशमा भव्य स्वागत गरिएको छ । सोमबार दिउँसो पेरिस ओर्लेको विश्व विजेता टोलीका सदस्यलाई ५ लाख भन्दा बढी समर्थकको ब्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गर्दै स्वागत गरेका थिए । क्रोएसियालाई ४–२ ले हराउँदै फ्रान्स दोस्रो पटक विश्व कप विजेता बनेको थियो । फ्रान्सले विश्व कप जितेको यो दोस्रो पटक हो । […]
08:44:00 | विश्वकप २०१८ , Durga Panta
रुस विश्वकप २०१८ को उत्कृष्ट खेलाडी क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचले जितेका छन् । त्यस्तै ६ गोल गरेका इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले गोल्डेन बुट जित्न सफल भए । लुका मोड्रिचले निकै राम्रो कप्तानको भूमिका निभाउदै क्रोएसियालाइ फाइनल सम्म पुराएकोले गोल्डेन बल प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । रसियाविरुद्धको उनको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो । उनले तीन खेलमा […]
यदि क्रोएसियाले विश्वकपको उपाधि जित्याे भने म निधारमा ट्याट्टु खोप्छु : इभान राकिटिक
16:05:51 | खेलकुद विश्वकप २०१८ , Durga Panta
क्रोएसियाका मिडफिल्डर इभान राकिटिकले यदि आफ्नो टोलीले विश्वकप जितेको खण्डमा निधारको अघिल्लो भागमा ट्याट्टु खोप्ने बताएका छन् । पहिलोपटक फाइनलमा स्थान बनाएको राकिटिकको टोलीले आइतबार विश्वकपको उपाधिको लागि फ्रान्सको सामना गर्दैछ । फाइनल अघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राकिटिकले भने, यदि क्रोएसियाले विश्वकप फटबलको उपाधि जितेर इतिहास बनाउनेछ भने म पनि निधारमा ट्याट्टु खोप्न तयार हुनेछु । […]
विश्वकप फुटबल : उपाधिका लागि अाज क्रोएसिया र फ्रान्स प्रतिस्पर्धा गर्दै , के होला फाइनलमा ?
| Banner-1 खेलकुद विश्वकप २०१८ , Durga Panta
२१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल यसअघिका विश्वकप भन्दा अलिक पृथक हुन पुग्यो । विभिन्न विश्लेषक तथा फुटबलका पारखीहरुलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै क्रोएसिया र फ्रान्स विश्वकपको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लुज्निकी रंगशालामा हुने फाइनलमा दुई युरोपियन राष्ट्र फ्रान्स र क्रोएसिया प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । खेल नेपाली समयअनुसार राति ८ः४५ बजेपछि हुनेछ । ऐतिहासिक रुपमा फाइनलमा पुगेको […]
विश्वकपमा तेस्रो स्थानको लागि आज इङ्ल्यान्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पार्धा हुने
16:57:40 | खेलकुद बिशेष विश्वकप २०१८ , Durga Panta
रसिया विश्वकपमा आज तेस्रो स्थानको लागि खेल हुदैछ । तेस्रो स्थानको खेल नेपाली समय अनुसार ७ः४५ बजे सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेडियममा युरोपका दुई बलिया राष्ट्र इङ्ल्यान्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पार्धा हुनेछ । यी दुई टोली जारी विश्वकपमा दोस्रोपटक आमने सामने हुन लागेका हुन् । समूह चरणको अन्तिम खेलमा यी दुई टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गोल्डेन जेनेरेसन […]
रियल म्याड्रिडको नेयमार भित्राउने प्रयास !
म्याड्रिड (एजेन्सी)– रियल म्याड्रिडले ब्राजिलियन स्टार नेयमारलाई भित्राउनका लागि प्रयास सुरु गर्ने भएको छ । नेयमार गत सिजन मात्र विश्व कीर्तिमानी रकममा अर्को चर्चित स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) पुगेका थिए । नेयमार भित्राउने प्रयासका लागि क्लबले आफ्ना सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रतिनिधि जुनी कालाफाटलाई पठाउने भएको छ । उनले नेयमारका बाबुसँग कुराकानी गर्ने बताइएको छ […]
विश्वकप फुटबल : अाज दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै , को पुग्ला फाईनलमा ?
13:32:45 | Banner-1 खेलकुद विश्वकप २०१८ , Purna Nanda Joshi
विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाईनलमा इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया भिड्दै छन् । रुसको लुजनिकी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १२ बजे सुरु हुनेछ । विजेता टोलीले उपाधिलागि फ्रान्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । इङ्ल्याण्डले सेमिफाईनलमा स्विडेनलाई २–० ले पराजित गरेको थियो । क्रोएसियाले आयोजक रुसलाई टाईब्रेकरमा हराउदै अन्तिम ४ को यात्रा तय गरेको थियो । निर्धारित […]
बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फाइनलमा !
| Banner-1 खेलकुद विश्वकप २०१८ , Purna Nanda Joshi
सेन्ट पिटर्सबर्ग (एजेन्सी) – फिफा विश्वकप २०१८ अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनल खेलमा बेल्जियमलाई पराजित गर्दै फ्रान्स फाइनल प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको फाइनलमा फ्रान्स १-० ले विजयी हुँदै उपाधिनजिक पुगेको हो । फ्रान्सका लागि दोस्रो हाफको ५१ औं मिनेटमा डिफेन्डर स्यामुएल उम्टिटीले गरेको गोल निर्णायक सावित भएको थियो । उनले एन्टोइन ग्रिज्मनको कर्नरमा गरेको हेडर गोलरक्षक […]
विश्वकप फुटबल : आज सेमिफाईनल खेलमा फ्रान्स र बेल्जियम भिड्ने , लुकाकु र एमबाप्पे चम्केलान् ?
16:55:03 | Banner-1 खेलकुद विश्वकप २०१८ , Purna Nanda Joshi
रुसी विश्वकप फुटबलमा आज सेमिफाईनलको खेल सुरु हुदैछ । पहिलो सेमिफाईनलमा युरोपका दुई महारथी फ्रान्स र बेल्जियमबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ । सेन्ट पिटरवर्गस्थित क्रिस्टोवस्की रंगशालमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १२ बजे सुरु हुनेछ । दुवै टोली समुह विजेताका रुपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका थिए । फ्रान्स समुह सी र बेल्जियम समुह जीको विजेताको […]
नेइमारबाट ‘नाटक’ सिकेको भन्दै एम्बाप्पेको आलोचना
| खेलकुद विश्वकप २०१८ , Purna Nanda Joshi
रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा खेल कौशलभन्दा बढी नाटकीय प्रदर्शन र फुर्ति देखाएकोमा ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेइमारको आलोचना भयो। ब्राजिल यतिबेला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहरिसकेको छ। तर नेइमारबाट ‘नाटक’ सिकेको भन्दै फ्रान्सका उदयीमान खेलाडी केलियन एम्बाप्पेको आलोचना भइरहेको छ। १९ वर्षिय स्टार खेलाडी एम्बाप्पेले पेरिस सेन्ट जर्मनका साथी नेइमारबाट यस्तो नाटकीय प्रदर्शन र फुर्ती सिकेकोमा आलोचना […]